“Neymar Jr wuxuu ka sareeyaa qof walba” – Gool FM
(Champ’ League) 12 Feb 2019. Laacibkii hore kooxda PSG ee reer Brazil Nenê ayaa caro weyn ka muujiyay in Neymar uusan ciyaari karin kulanka caawa ay ku wada ciyaari doonaan kooxaha Manchester United iyo PSG lugta koowaad wareega 16-ka tartanka Champions League.
Thomas Tuchel ayaa wajihi doona dhibaato xoogan kulanka ay caawa kooxda Manchester United ku booqan doonaan garoonka Old Trafford, sababa la xiriira inay ka maqan yihii xidigaha muhiimka ah ee kala ah Neymar, Meunier iyo Edinson Cavani.
37 jirkan reer Brazil horeyna u soo xirtay maaliyada kooxda PSG ayaa wuxuu ka hadlay kulanka ay caawa wada ciyaari doonaan kooxaha Manchester United iyo PSG.
“Aad ayay u fiicnaan lahayd hadii uu ciyaari lahaa Neymar, sababtoo ah waa ciyaaryahan aad u caqli badan, farsamo ahaan wuxuu ka sareeyaa qof walba”.
“Waxaan u maleynayaa inuu ku nool yahay waqti muhim ah, wuxuu muujiyaa tayadiisa iyo awoodiisa sanad walba, wuxuu noqon karaa kan ugu awooda badan sanad kasta”.
Intaas kadib laacibkii hore kooxda PSG ee reer Brazil Nenê ayaa wuxuu ka hadlay in kooxda reer France aysan abid meel fog ka gaarin tartanka xiisaha badan ee Champions League.
‘Waxaan qabaa in khibrada qaar aan dhameystirneyn, waxayna u baahan yihiin inay si joogta ah u ciyaaraan”.
“Waxaa jira kooxo heer sare ah ee khibrad badan u leh tartankan, waxay la ciyaarayaan kooxo waa weyn, sidaasi darteed, dabcan way ku dhibtoonayaan inay ku guuleystaan”.
HORDHACA: Manchester United vs PSG..........(Ma Ogtahay in kulanka Caawa loo isticmaali doono....)
N'Golo Kanté oo wacad ku maray in Manchester City ay ka aarsan doonaan guuldaradii naxdinta lahayd